Ị ga-esi a onwunwu ọhụrụ ekwentị, ma hapụrụ mkpa stof na gị ochie ekwentị? Ọ bụ n'ezie a oké ihe mgbu nyefee data site na otu ekwentị ọzọ, karịsịa mgbe ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ dị iche iche mobile sistem. Ọ bụrụ na ị nnyocha ụfọdụ ekwentị transfer ngwa, na ị na-nri ebe. Isiokwu a gosiri na ị elu 7 ekwentị transfer ngwa ọdịnala na-eme ka data transfer effortlessly.
1. Samsung Smart Gbanye
2. HTC Nyefee Ngwá Ọrụ
3. Motorola akwagakwa
4. LG ndabere
5. Xperia ™ Nyefee Mobile
Dị ka aha na-atụ aro, Samsung Smart Gbanye na-kere nyefee data si ochie ekwentị gị Samsung Galaxy smartphones. Ọdịnaya ọ pụrụ nyefee agụnye kọntaktị, ozi, photos, music, ndetu, videos, kalenda na ndị ọzọ, na ọ bụ dị iche iche dabeere na gị ochie ekwentị.
Nyefee na site na iPhone:
Way: iCloud backups n'elu WiFi ma ọ bụ ụgbọelu na netwọk
Content: kọntaktị, foto, oku na ndekọ, kalenda ihe, oti mkpu, WiFi ntọala, nchọgharị na ibe edokọbara ma ngwa ndepụta.
Nyefe si ihe gam akporo ngwaọrụ:
Way: N'ime WiFi.
Tutorial: Tinye 2 Android ngwaọrụ n'ime 10 cm. Mepee Smart Gbanye ngwa ọdịnala na ma gam akporo ngwaọrụ, ma họrọ gị chọrọ ọdịnaya nyefee.
OS: The isi iyi Android ngwaọrụ agba Android 4.0 ma ọ bụ ruo.
Your ọhụrụ Android ngwaọrụ agba Android 4.1.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
HTC Nyefee Ngwá Ọrụ bụ a pụrụ iche ekwentị transfer ngwa ịkwaga ọdịnaya site na gị ochie HTC ekwentị ma ọ bụ ndị ọzọ Android ekwentị ọhụrụ gị HTC One. Ọ na-eme ka ọ dị nnọọ mfe ma dị mfe ịkwaga kọntaktị, ozi, video, kalenda, photos, music, ibe edokọbara, akwụkwọ ahụ aja na ngosi ntọala.
Akwado gam akporo ngwaọrụ:
• Nyefee si (ochie ekwentị): Android ngwaọrụ-agba ọsọ 2.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
• Nyefee gaa na (ọhụrụ ekwentị): HTC One
Mụta ihe banyere HTC Nyefee Ngwá Ọrụ >>
Dị nnọọ okporo mmiri gị ochie na ekwentị na kwalite ka Moto G? Motorola akwagakwa bụ ihe kpọmkwem nri ngwa n'ihi na gị. Na a mfe ekwentị transfer ngwa, ị nwere ike akwagakwa data ọhụrụ gị Motorola ekwentị site na Android ekwentị, a na-abụghị ama na Bluetooth, na iCloud.
os: Android 2.2 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
ọdịnaya Ịnwere ike ịnyefe: SIM kọntaktị, foto, ederede akụkọ ihe mere eme, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, videos
Nyefee si na-abụghị smartphones:
Non smartphone: a na-abụghị ama na Bluetooth
ọdịnaya Ịnwere ike ịnyefe: Ndi ana-akpo
Nyefee si iPhone site iCloud:
ọdịnaya Ịnwere ike ịnyefe: kọntaktị na kalịnda
Mụta ihe banyere Motorola akwagakwa >>
Dị ka ekwentị data transfer apps n'elu, LG ndabere a na-eji nyefee data si ochie Android ekwentị na mbadamba ọhụrụ gị LG G2, G3 na karịrị. Na ya aka, ị na-enwe ike ịkwaga ozi, kọntaktị, kalenda, ibe edokọbara, photos, videos, akwụkwọ faịlụ, olu memo nakwa dị ka music.
• Nyefee gaa na (ọhụrụ ekwentị): LG G2 na karịrị.
Mụta ihe banyere LG ndabere >>
Nwere nsogbu na-enyefe faịlụ site na otu agadi ekwentị gị Sony Xperia ekwentị? Jiri ya nwayọọ. Xperia ™ Nyefee Mobile abịa maka gị. Ọ bụ ihe àjà ihe ọṅụṅụ-mfe na mfe ngwa n'ihi na ekwentị data transfer, nke na-enyere aka detuo kọntaktị, SMS, MMS, kalenda, na ndetu, music, video, akwụkwọ ndị ọzọ si gị ochie Android smartphone, iPhone, iPad, iPod aka na Windows ekwentị mkpanaaka na- ọhụrụ gị Sony Xperia igwe.
Nyefee si ochie smartphones:
• Android 4.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Na-ejedebeghị na Sony smartphones.
• iPhone, iPad na iPod zọsara na-agba ọsọ iOS 4.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
• Windows Phone 8.0 na mgbe e mesịrị.
• Sony Xperia igwe na-agba ọsọ Android 4.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Mụta ihe banyere Xperia ™ Nyefee Mobile >>
Dị ka ị maara, ọ bụla ekwentị transfer ngwa n'elu a na-ejedebeghị na otu Android emeputa. Gịnị ma ọ bụrụ na unu achọghị iji dị otú ahụ ngwa, ma na-achọ chọta a vasatail ekwentị na ekwentị transfer ngwa? E-abịa SHAREit. Ọ na-ahuta ka ụwa kasị ụzọ ịkọrọ photos, ngwa, videos, music, akwụkwọ faịlụ na kọntaktị n'etiti gam akporo igwe, iOS ngwaọrụ na Windows PC. Ọ eliminates mkpa maka USB cables ka ịnyefe ọdịnaya-ejighi eriri. Ihe niile ị ga-eme bụ ibudata ma wụnye SHAREit na igwe ị chọrọ nyefee data. Igwe na SHAREit ga-akpaghị aka chọta onye ọ bụla ọzọ mgbe nọ nso.
Mụta ihe banyere SHAREit >>
> Resource> égwu> Top 6 ekwentị Nyefee égwu nyefee Data seamlessly